अब नेपाल बैंक काे खातालाई ‘खल्ती’ सँग जाेड्नुहाेस्,सिधै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्नुहाेस्
by Sweta Maharjan | Jul 20, 2020 | Services & Tips |0comments
तपाइँकाे नेपाल बैंकमा खाता छ भने अब ‘खल्ती ‘माेवाइल वालेटमार्फत सिधै तपाइँले खरिद गरेकाे बस्तु तथा सेवाकाे भुक्तानी दिन वा नगद पठाउन सक्नु हुने भएकाे छ । खल्तीले नेपाल बैंक सँग भुक्तानी सेवाका लागि सम्झाैता गरेर सेवा सुरू गरिसकेकाे छ ।
खल्तीले नेपाल बैंककाे खातालाई ‘खल्ती ‘माेवाइल एपसँग जाेड्दा तपाईंलाई लेनदेन काराेबार गर्न निकै सजिलो हुनेछ। यसले तपाईंको समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ । तपाईंलाई हरेक पटक काराेबार गर्दा वित्तीय विवरणहरू टाइप गर्ने झण्झट पर्ने छैन । तपाइँलाई बैंक वा अरू माध्यमबाट खल्तीमा नगद जम्मा गर्ने झण्झट हुने छैन ।
‘खल्ती ‘ लाई नेपाल बैंककाे खातामा जाेडेपछि सीधै रकम स्थानान्तरण (Transfer) गर्न, ‘खल्ती ‘माेवाइल एपमा भएका सबै सेवाहरू प्रयाेग गरेबापतकाे शुल्क भुक्तानी गर्न, परिवारका सदस्य, आफन्त र साथीभाइलाई नगद पठाउन सकिन्छ । यी सबै काम गर्न ‘खल्ती ‘ वालेटमा छुट्टै पैसा लोड गर्नुपर्दैन। तपाईले नेपाल बैंकको खातालाई खल्तीकाे खातामा लिंक मात्रै गर्नु पर्छ। यसाे गर्दा तपाईको नेपाल बैंककाे खातामा रहेकाे ब्यालेन्सबाट सिधै रकम भुक्तानी गर्न र रकम स्थानान्तरण (Transfer) गर्न सकिन्छ। यसबाहेक ‘खल्ती ‘Bank Direct बाट तपाईले ‘खल्ती ‘वालेटमा सिधै लिंक गरिएको नेपाल बैंककाे खाताबाट नगद लोड गर्न सक्नुहुनेछ ।
नेपाल बैंक काे खाता ‘खल्ती’ मा कसरी लिंक गर्ने?
‘खल्ती’ खाता र नेपाल बैंककाे खाता जाेड्न दुवैतिर तपाइँकाे नाम र मोबाइल नम्बर एउटै हुनुपर्छ।
‘खल्ती ‘माेवाइल वालेट वा khalti.com मा साइन अप गर्नुहोस् । ‘खल्ती ‘माेवाइल एप वा khalti.com बाट लग इन गरेर वेब ड्यासबोर्डमा जानुहाेस् ।
गृह पृष्ठमा गएर “Link Bank Account” मा ट्याप गर्नुहोस्।
“Link Bank Account” मा ट्याप गर्नुहोस् र नेपाल बैंकलाई छान्नुहाेस् । .
नेपाल बैंक छनौट गरेपछि, तपाईंको बैंक खाता नम्बर प्रविष्ट (Entry) गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाइँकाे नाम र मोबाइल नम्बर खल्तीकाे KYC बाट स्वचालित रूपमा आउँछ ।
सबै विवरणहरू भर्नुहाेस् । त्यसपछि Submit बटन थिच्नुहाेस् ।
तपाइँको मोबाइल नम्बरमा एउटा एक पटक मात्र प्रयाेग गर्न मिल्ने पासवर्ड (OTP ) प्राप्त हुनेछ।
प्राप्त भएकाे OTP कोडलाई हाल्नुहाेस् ।
अब तपाइँको बैंक खाता तपाइँको ‘खल्ती ‘वालेटमा सफलतापूर्वक जोडिनेछ।
कसरी Bank Direct प्रयोग गरी नेपाल बैंककाे खताबाट ‘खल्ती ‘वालेटमा पैसा लोड गर्ने?
साइन अप गर्नुहोस् । ‘खल्ती ‘एपबाट वा Khalti.com वेब ड्यासबोर्डबाट लगईन गर्नुहोस् ।
गृहपृष्ठमा “Load Funds” मा ट्याप गर्नुहोस् र “Linked Account” चयन गर्नुहोस्।
तपाईले लोड गर्न चाहनुभएको रकम हाल्नुहाेस् । त्यहाँ remarks मा केही कुराहरू भर्नुहोस् ।
अब तपाईंको ‘खल्ती ‘वालेटमा तत्काल नगद जम्मा हुन्छ ।
How to set up App Password on Khalti Digital Wallet?